CELEBRATING YOUTH CULTURE IN MYANMAR - Golden Place
CELEBRATING YOUTH CULTURE IN MYANMAR
Kyun Taw Road, Kamaryut Yangon
~~~~လူငယ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ပွဲတော်တစ်ခုကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည်~~~~
SQUAR နှင့်အတူ လက်တွဲပြီး Ooredoo ၊ Coca-Cola ၊ Pond’s နှင့် Clear စသောနာမည်ကြီး ကုမ္မဏီကြီးများပါဝင်ဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် ပျော်ရွင်စရာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်များအပြင် လူငယ်များအတွက် အခြားသော အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူ လူငယ်အချင်းချင်းရင်းနှီးချစ်ကြည်မှုရရှိဖို့မပျက်မကွက်လာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိလှတဲ့အားလပ်ရက်မှာ တစ်နေ့တည်း တစ်နေရာထဲမှာ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ပျော်ရွင်စရာအစီအစဉ်များကို ခံစားလိုက်ပါ။ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များနှင့်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖျော်ဖြေမည့် တေးသီချင်းများကို အခမဲ့နားဆင်နိုင်ခြင်း၊ နာမည်ကျော် ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ ရင်ခုန်စရာအစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်နိုင်ခြင်း၊ ပျော်ရွင်ရင်ခုန်ဖွယ်ရာကောင်းသော ကစားနည်းများကို ယှဉ်ပြိုင်ကစား၍ဆုကြီးများနှင့် အခြားဆုများကိုရယူနိုင်ခြင်းတို့နှင့်အတူ သင့်အနာဂတ်အတွက် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းကောင်းများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများကို လေ့လာနိုင်ဖို SQUAR မှသယ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် မပျက်မကွက်တက်ရောက်ဖို့တော့လိုမယ်နော်…………
Ar-T and Uranium Dance Group တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Be there or be SQUAR’d!
ကျင်းပမည့်နေ့ရက် -၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ရက်
အချိန် – နံနက် ကိုးနာရီ မှ ညနေ ၆နာရီ အထိ
နေရာ – Junction Square, Yangon, Myanmar
SQUAR Youth Festival
SQUAR, in partnership with Ooredoo, Coca-Cola, Pond’s and clear invites you to join us foraa fun and exciting day to to meet, learn and share!
We are bringing some of the most popular celebrities, biggest companies and coolest people in one place forafree day of fun. Come and enjoy games, meet celebrities and listen to great music. There will also be areas featuring career and education opportunities so come prepared to embrace your future!
Ar-T and Uranium Dance Group
Place: Junction Square, Yangon, Myanmar